China ZAZE Petro-kemikari Process Pump-1 fekitari uye vagadziri | Convista
Isu, zvinoenderana nedhizaini uye gadzira standard yeAPI61011th Centrifugal Pump yePetroleum, Petrochemical uye Natural Gas Sectors, tinogadzira ZA / ZE dzakateedzana petro-chemakemikari maitiro mapombi.
Main pombi muviri, zvinoenderana nemhando yerutsigiro, yakakamurwa kuita zviviri zvivakwa: OH1 uye OH2, uye impeller ndeye yakavhurika uye yakavharwa zvivakwa.
Izvo, ZA ndeya OH1, yakavharwa impeller; uye ZAO ndeye OH1, yakavhurika;
ZE ndeye OH2, iine yakavharwa, uye ZE0 ndeye OH2, ine yakavhurika.
ZE pombi, zvinoenderana nekumanikidza giredhi, zvakare yakakamurwa muzvikamu zvitatu: D, Z uye G (D kazhinji haina kunyorwa) yemamiriro ekushanda.
Inoona maficha akakura mumamiriro ekufambisa epamusoro uye epakati-kumanikidza yakachena kana yakasviba, inokanganisa uye yakapfeka zvinhu zvemabhizimusi akadai sekuchenesa mafuta, indasitiri yemakemikari yemarasha, petrochemical indasitiri, munyu kemikari mainjiniya, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, pepuru pulp uye kugadzira mapepa, kugungwa kwemvura yegungwa, kurapwa kwemvura, uye simbi, kunyanya kutakurwa kwakanyanya kwekumanikidza, kune chepfu, kunopisa, kuputika, uye kwakasimba zvinhu zvinokanganisa muzvikamu zvakadai se olefin michina, ionic membrane caustic soda, kugadzira munyu, fetiraiza, reverse osmosis mudziyo , gungwa remvura desalination, MVR uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, nezvimwewo, kuratidza kusimba kwesimba.
Kuyerera: Q = 5 ～ 2500m3 / h Musoro: H ≤ 300m
Muenzaniso: ZEO 100-400
ZEO ------ ZE Pump akateedzana kodhi
O Semi-yakavhurika impeller
100 -------- Outlet dhayamita: 100 mm
400 -------- Chezita dhayamita yemhepo: 400 mm
1.Ukukutu uye simba zvinovandudzika zvakanyanya nekukoshesesa dhizaini yeshafting. Izvi zvinowedzera zvakanyanya kuvimbika kwepombi, ichivimbisa kwete zvakare hupenyu hwakareba hwebasa uye kudzikisa mutengo wekushandisa.
2. Kutakura muviri kwakagadzirwa muzvimiro zviviri zvekutonhodza neakasikwa uye kutonhora kwemvura. Kana iri yepakati pamusoro pe105 ℃, inokurudzira kuve wakashongedzwa neyekutonhodza mvura system, iyo inoderedza tembiricha yekutakura nekutonhodza mafuta ekuzodza enzvimbo iri nani yekushanda;
3. Iyo bhavha yepombi yakagadzirirwa A inotonhorera mhango, iyo inoderedza tembiricha yemuchina yekuisa chisimba mhango nekutonhora iyo mhango yehupenyu hwakareba hwebasa.
4. Iyo pombi impelen nut yakavharwa nekuunzwa kweGerman-patent yekuzvivharira yega. Kutenda kune washer, nzungu hadzina kusununguka kana zvadzoreredza pombi kutenderera kana kudedera. Izvi zvinoreva kuti iyo pombi inoda kushomeka kushanda uye kuisa mamiriro.
5. Idzi hombe-dzinoyerera dzakateedzana mapombi ane maviri-edzimba dzimba, ayo akagadzirirwa kunyatso kuenzanisa iro radial simba rinogadzirwa pasi peasina-akagadzirirwa mashandiro ezvinhu. Uye zvakare, inotsvaga rakaringana axial simba richisimbisa zvindori uye maburi ekuenzanisa.
6.Mhando dzakadai dzeMechanical chisimbiso senzvimbo dzakabatanidzwa, imwechete-terminal kana maviri-terminal, pamwe chete neanoenderana anobatsira ekuisa chisimbiso masisitimu anogona kushandiswa zvinoenderana nepakati kutakurwa, kuitira kuti kuiswa chisimbiso uye kutonhora kutendeke. Kuiswa chisimbiso uye kusuka kunoitwa zvinoenderana neAPI682. Pombi shaft yekuisa chisimbiso inogona kuve inoenderana maererano nevashandisi 'chaiwo zvido.
7. Iyo shaft inopihwa nematanho epanner, ayo anodzora kutsvedza mukubata nevanopinza, kuitira basa rakakwirira mukumisikidza nekuputsa.
8. Nedhiramu yakawedzerwa yekubatanidza, iyo pombi inoda kusabvarurwa kwepombi nedunhu rekugadzirisa uye kugadzirisa muchina wese.
Pashure: ZAO Solid Particle Dhirivhari Pump
Zvadaro: Zirconium Pump
Chitubu chakatakurwa chakadzika chinosimudza mhando ne lever kuchengeteka v ...
T mhando firita
Yechirimo-yakatakura yakazara-yakatakura mhando ine lever kuchengetedzeka ...